Social Distancing with Bike Distancing formula – Gliders Helmet - Biggest Online Helmet Store in Myanmar
Social Distancing with Bike Distancing formula
ကြှနျ‌တျောတို့တှေ ကားမောငျးတဲ့အခါမှာ Brake Distance/ Stopping Distance
ဒါဆိုရငျ ဆိုငျကယျတှမှောရော Brake Distance မရှိဘူးလား ?
ရှိပါတယျ . . .ဒါပမေယျ့ ကားရဲ့ Brake Distance ကိုတှကျခကျြဖို့အတှကျ အရှိနျပျေါမှာမူတညျပွီး တှကျခကျြနိုငျပမေယျ့ ဆိုငျကယျတဈစီးရဲ့ Brake Distance ကိုတှကျခကျြရာမှာ အရှိနျအပွငျ ဘရိတျအုတျတဲ့နညျးစနဈနဲ့ မောငျးနှငျသူရဲ့ကြှမျးကငျြမှုအပျေါမှာ အမြားကွီးသကျဆိုငျပါတယျ။
- ဥပမာအနနေဲ့ 150 CC ဘီးတဈစီးနဲ့ ဆိုငျကယျကြှမျးကငျြတဲ့ Professional Rider တဈ‌ယောကျနဲ့ သာမာနျဆိုငျကယျစီးနှငျသူတို့ နှဈ‌ယောကျကို 80 Km/h နှုနျးနဲ့မောငျးနှငျစပွေီး နညျးစနဈမြိုးစုံနဲ့ ရပျတနျ့စပေါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဆိုငျကယျကို ဂီယာသီးသနျ့အသုံးပွုပွီးရပျတနျ့စရောမှာ Pro Rider က မီတာ 100 ဝနျးကငျြခနျ့မှာရပျတနျ့နိုငျပွီး သာမာနျ Rider ကတော့ မီတာ 140 ခနျ့မှာရပျတနျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယနညျးလမျးအနနေဲ့ ‌နောကျဘရိတျကို အသုံးပွုပွီးရပျတနျ့စတေဲ့အခါ Pro Rider က မီတာ 60 ခနျ့မှာရပျတနျ့နိုငျခဲ့ပွီး သာမာနျ Rider ကတော့ မီတာ 90 ခနျ့မှာရပျတနျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးနညျးလမျးအနနေဲ့ ရှဘေ့ရိတျကိုအသုံးပွုပွီးရပျတနျ့စပေါတယျ။
ဒီတဈကွိမျမှာလညျး Professional Rider ကီတာ 20 ခနျ့မှာ ရပျတနျ့နိုငျပမေယျ့ သာမာနျ Rider ကတော့ မီတာ 40 ဝနျးကငျြမှာမှရပျတနျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီစမျးသပျခကျြမှာ Rider တှရေဲ့ Reaction Time ကို ထညျ့သှငျးတှကျခကျြထားခွငျးမရှိဘဲ နညျးစနဈတဈခုခငျြးစီကို Rider တှရေဲ့ကြှမျးကငျြမှုပျေါမှာသာ စဈဆေးထားတဲ့စမျးသပျခကျြဖွဈပါတယျ။
ဒီနရောမှာ သတိထားမိတဲ့တဈခကျြက တညျငွိမျတဲ့ဘီးကွီးတှမှော ရှဘေ့ရိတျကိုအသုံးပွုခွငျးက ထိရောကျမှုအားကောငျးပမေယျ့ ‌မောငျးနှငျသူရဲ့ကြှမျးကငျြမှု အပျေါမှာလညျးအမြားကွီးမူတညျနပေါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဆိုငျကယျစီးနခြေိနျမှာ Brake Distance နဲ့ Reaction time အတှကျ အကှာအဝေး အလုံအလောကျပေးထားသငျ့ပွီး သငျ့ဆိုငျကယျ နဲ့ အကြှမျးတဝငျရှိနဖေို့လညျးလိုပါတယျ။ ဒါမှလညျး ကိုယျသှားမယျ့လမျးမှာ အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ လိုရာခရီးကို ခြောခြောမှမှေ့ရေ့ောကျရှိနိုငျမှာပါ။
ကျွန်‌တော်တို့တွေ ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ Brake Distance/ Stopping Distance ဆိုတာရှိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဆိုင်ကယ်တွေမှာရော Brake Distance မရှိဘူးလား ?
ရှိပါတယ် . . .ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ Brake Distance ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက် အရှိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး တွက်ချက်နိုင်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ Brake Distance ကိုတွက်ချက်ရာမှာ အရှိန်အပြင် ဘရိတ်အုတ်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့ မောင်းနှင်သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။
- ဥပမာအနေနဲ့ 150 CC ဘီးတစ်စီးနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Professional Rider တစ်‌ယောက်နဲ့ သာမာန်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်သူတို့ နှစ်‌ယောက်ကို 80 Km/h နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်စေပြီး နည်းစနစ်မျိုးစုံနဲ့ ရပ်တန့်စေပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဂီယာသီးသန့်အသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေရာမှာ Pro Rider က မီတာ 100 ဝန်းကျင်ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ပြီး သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 140 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယနည်းလမ်းအနေနဲ့ ‌နောက်ဘရိတ်ကို အသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေတဲ့အခါ Pro Rider က မီတာ 60 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပြီး သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 90 ခန့်မှာရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့ ရှေ့ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးရပ်တန့်စေပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း Professional Rider ကီတာ 20 ခန့်မှာ ရပ်တန့်နိုင်ပေမယ့် သာမာန် Rider ကတော့ မီတာ 40 ဝန်းကျင်မှာမှရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာ Rider တွေရဲ့ Reaction Time ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိဘဲ နည်းစနစ်တစ်ခုချင်းစီကို Rider တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာသာ စစ်ဆေးထားတဲ့စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိထားမိတဲ့တစ်ချက်က တည်ငြိမ်တဲ့ဘီးကြီးတွေမှာ ရှေ့ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းက ထိရောက်မှုအားကောင်းပေမယ့် ‌မောင်းနှင်သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်နေပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်စီးနေချိန်မှာ Brake Distance နဲ့ Reaction time အတွက် အကွာအဝေး အလုံအလောက်ပေးထားသင့်ပြီး သင့်ဆိုင်ကယ် နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းမှာ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ လိုရာခရီးကို ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိနိုင်မှာပါ။